Shina feno karibon-tsolika Shina feno, takelaka misy karibonina feno, taratasy misy karibona feno, karbônina vita amin'ny karbônina feno.
Description:Feno karibon-tsolika feno,Plate Fibon-tsolika feno,Sheety Fibolan'ny karibona feno,Birao Fibesin-tsolika feno,,
Home > Products > Carbon Fiber Sheet > Sheety Fibolan&#39;ny karibona feno
Ny vokatra avy amin'ny Sheety Fibolan'ny karibona feno , mpanofana manokana avy any Shina, Feno karibon-tsolika feno , Plate Fibon-tsolika feno mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Sheety Fibolan'ny karibona feno R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
cnc manapaka takelaka fibre karbonika router ho an'ny fialamboly  Contact Now
Serivisy karibonin'ny serivisy vita amin'ny karbonina  Contact Now
Ny lambam-borona vita amin'ny karbonina dia miondrika  Contact Now
Carame Frame Plate Frame Frame  Contact Now
3 Plate Krismasy marevaka 100% Plate Karbona  Contact Now
Ny takelaka vita amin'ny loko marevaka dia manarona Karibona feno  Contact Now
0.5X250X450mm vidin'ny takelaka vita amin'ny karbon amin'ny UAV  Contact Now
1.0x250x400mm UAV dia manenona takelaka feno karbonika feno  Contact Now
CNC 3K Woven feno karbôniby Fibesiny  Contact Now
Fototry ny fibre karbonina madio ho an'ny drôna FPV  Contact Now
3k feno Carbon Fiber Sheets amin'ny fanapahana  Contact Now
Ny “X” CNC Cut Carbon fibebahana avo lenta  Contact Now
Plateum Fitaovana Fangaro karbonika  Contact Now
Fitaovana DIY fanamboarana fiaramanidina fpv DIY  Contact Now
FPV Kit-Drame Frame Kit Fiber Karbon  Contact Now
Namboarina vita amin'ny fibre karbonina 100% Japan Toray  Contact Now
Fanamboarana takelaka vita amin'ny karbonina vita amin'ny karbonina ho an'ny takelaka rindrina  Contact Now
cnc manapaka takelaka fibre karbonika router ho an'ny fialamboly
cnc manapaka takelaka fibre karbonika router ho an'ny fialamboly Ny cnc manapaka ny takelaka karbônina vita amin'ny fibre ho an'ny fialamboly dia afaka mampiasa tanteraka ny tanjaky ny fibre karbonika sy ny modulus elastic, amin'ny...
Serivisy karibonin'ny serivisy vita amin'ny karbonina
Serivisy karibonin'ny serivisy vita amin'ny karbonina Mombamomba ny vokatra: Ny fibre karbônina dia karazana tanjaka vaovao sy fitaovana fibatana avo lenta avoaka izay misy mihoatra ny 95% karbônina. Ny fibre karbonina dia mora apetraka sy...
Ny lambam-borona vita amin'ny karbonina dia miondrika
Ny lambam-borona vita amin'ny karbonina dia miondrika Mombamomba ny vokatra: Ny fibre karbônina dia karazana tanjaka vaovao sy fitaovana fibatana avo lenta avoaka izay misy mihoatra ny 95% karbônina. Ny fibre karbonina dia mora apetraka sy...
Carame Frame Plate Frame Frame
Carame Frame Plate Frame Frame Amin'ny ankapobeny, ny olona dia te hampiasa takelaka karbonina fibre. Ary afaka manome valizy misy plana misy loko misy karbonika maro loko. O serivisy OEM & ODM dia misy. (7) Raha misy takelaka lemaka misy...
3 Plate Krismasy marevaka 100% Plate Karbona
3 Plate Krismasy marevaka 100% Plate Karbona Amin'ny ankapobeny, ny olona dia te hampiasa takelaka karbonina fibre. Ary afaka manome valizy misy plana misy loko misy karbonika maro loko. O serivisy OEM & ODM dia misy. (4) Rehefa alefa ny...
Ny takelaka vita amin'ny loko marevaka dia manarona Karibona feno
Ny takelaka vita amin'ny loko marevaka dia manarona Karibona feno Amin'ny ankapobeny, ny olona dia te hampiasa takelaka karbonina fibre. Ary afaka manome valizy misy plana misy loko misy karbonika maro loko. O serivisy OEM & ODM dia...
0.5X250X450mm vidin'ny takelaka vita amin'ny karbon amin'ny UAV
Vidin'ny singa: USD 27.6 / Piece/Pieces
0.5X250X450mm Carbon Fiber Sheet Product vokatra ho an'ny UAV 0.5X250X450mm vidin'ny varingarina vita amin'ny karbon an'ny UAV dia ampiasaina betsaka amin'ny karazan-jiro vita amin'ny metaly, entana vita amin'ny hoditra,...
1.0x250x400mm UAV dia manenona takelaka feno karbonika feno
Vidin'ny singa: USD 24.3 / Piece/Pieces
1.0x250x400mm UAV dia manenona takelaka feno karbonika feno 1.0x250x400mm UAV nofon-tsofina feno takelaka vita amin'ny karbonina: vokatra vita amin'ny karbon dia nohamafisina fanamafisana tokana, ny fivoarana dia ny karbonina resregnated...
CNC 3K Woven feno karbôniby Fibesiny
Vidin'ny singa: USD 66.7 / Piece/Pieces
CNC 3K Woven feno karbôniby Fibesiny CNC 3K Loven Carbon Fiber Sheet Price dia tontolo iainana, maivana, vovoka, mateza, fanoherana, matevina mahery vaika & fitondran-tena tsara, faran'izay malama sy malefaka vita amin'ny tany. Ny...
Fototry ny fibre karbonina madio ho an'ny drôna FPV
Fototry ny fibre karbônina madio ho an'ny drôna FPV Filazalazana ny entona karbônina feno Ho an'ny takelaka karbônina amin'ny karbônina dia mampiasa fibre karbonina 100% isika, fa tsy tafiditra amin'ny fitaratra na fitaovana maloto...
3k feno Carbon Fiber Sheets amin'ny fanapahana
Vidin'ny singa: USD 102.6 / Piece/Pieces
3k feno Carbon Fiber Sheets amin'ny fanapahana Momba ny firafitry ny takelaka vita amin'ny karbonika 2mm namboarina ho lehibe habe Diy, dia azo atao ho vovoka karbonika madio na foibe fitaratra fitaratra miaraka amin'ny masonam-bazona...
Ny “X” CNC Cut Carbon fibebahana avo lenta
Ny “X” CNC Cut Carbon fibebahana avo lenta Mombamomba ny vokatra: Ny takelaka fibre karbônina tsy misy fitaovana fanadiovana . Ny habenay matetika dia 400x500mm / 500x600mm ary manana vakoka ny 0.5-7.0
Plateum Fitaovana Fangaro karbonika
Plateum Fitaovana Fangaro karbonika Mombamomba ny vokatra: Ny takelaka fibre karbônina tsy misy fitaovana fanadiovana . Ny habenay matetika dia 400x500mm / 500x600mm ary manana refy 0.5-7.0 mm ny
Fitaovana DIY fanamboarana fiaramanidina fpv DIY
Fitaovana DIY fanamboarana fiaramanidina fpv DIY Mombamomba ny vokatra: Ny takelaka fibre karbônina tsy misy fitaovana fanadiovana . Ny habenay matetika dia 400x500mm / 500x600mm ary manana vakoka ny 0.5-7.0
FPV Kit-Drame Frame Kit Fiber Karbon
FPV Kit-Drame Frame Kit Fiber Karbon Mombamomba ny vokatra: Ny takelaka fibre karbônina tsy misy fitaovana fanadiovana . Ny habenay matetika dia 400x500mm / 500x600mm ary manana refy 0.5-7.0 mm ny
Namboarina vita amin'ny fibre karbonina 100% Japan Toray
Namboarina vita amin'ny fibre karbonina 100% Japan Toray Mombamomba ny vokatra: Ny takelaka fibre karbônina tsy misy fitaovana fanadiovana . Ny habenay matetika dia 400x500mm / 500x600mm ary manana vakoka ny 0.5-7.0
Fanamboarana takelaka vita amin'ny karbonina vita amin'ny karbonina ho an'ny takelaka rindrina
Fanamboarana takelaka vita amin'ny karbonina vita amin'ny karbonina ho an'ny takelaka rindrina Mombamomba ny vokatra: Ny takelaka fibre karbônina tsy misy fitaovana fanadiovana . Ny habenay matetika dia 400x500mm / 500x600mm ary manana...
Shina Sheety Fibolan'ny karibona feno mpamatsy
Ity dia taratasy feno fibre karbonika feno, izay be mpitia indrindra amin'ny takelaka fibre karbonika.Bot 0/90 degre ary 0/45 / -45 / 90 degre (Quasi-isotropic) dia misy takelaka fibre karbonika misy. 1k, 1.5k, 3k feno ny fibre karbonika feno dia ok, izay mifototra amin'ny zavatra takianao.Ny habe mahazatra dia 200x250mm, 200x300mm, 250x400mm, 400x500mm ary 500x600mm.Ny habe namboarina mahazatra dia ok ho antsika.
Ny takelaka fibre karbonika mahazatra dia ahitana
Fitaovana anatiny: 0/90 (Mandanjalanja) Fiomanana Karibia tsy matotra
Fivoarana ivelany: Matte / glossy, twill / plain
Ireo vilia dia azo tapaka sy manonta ny sary isan-karazany araka ny sary ataonao na santionanao
Feno karibon-tsolika feno Plate Fibon-tsolika feno Sheety Fibolan'ny karibona feno Birao Fibesin-tsolika feno 3K Feno karibon-tsolika feno